Imizuzu yeConway Condo yaseMantla ukuya kwiNtaba yeCranmore, ukuThenga, ukutya
UStephanie unezimvo eziyi-599 zezinye iindawo.
UStephanie ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Ifumaneka kwimizuzu nje embalwa ukusuka edolophini kuMantla eConway, le condo isandula kulungiswa iya kuba likhaya lakho kude nekhaya ngelixa usenza iinkumbulo nosapho okanye abahlobo bakho. Ukuhamba umgama ukuya kwiindlela zamahlathi eGreen Preserve! Yonwabela ukuba yimizuzu nje kwiivenkile zalapha ekhaya, iiresityu, iCranmore Ski Resort, iindlela zokuhamba intaba, kunye nazo zonke iiNtaba eziMhlophe. Emva kosuku oluzele luhambo, buyela ekhitshini elixhotyiswe ngokupheleleyo, iibhedi ezitofotofo, kunye negumbi lokuhlala eliqaqambileyo nelipholileyo eline-Smart TV. Ngaba ujonge ubusuku ngaphakathi? Chitha ubusuku malunga nomgodi womlilo ongasemva kwaye ubethe into ethile kwi-grill. Le condo iqaqambile, ibanzi, isandula ukulungiswa kwaye ilungele ukubamba indawo yakho yokubaleka!
- Eli khaya lilala iindwendwe ezili-10 (ubuninzi be-8 abadala) kumagumbi okulala ama-3
- Iibhedi zebhedi zezabantwana kuphela
-Ikhaya linee-TV ezi-2 ze-Smart kunye ne-Wi-Fi
-Imizuzu ukuya kwilali yaseConway, ukuthenga, ukutya, ukutyibiliza kunye nokunye
-Zonke iindwendwe kufuneka zijonge kwaye zisayine isivumelwano sethu sokurenta kunye neRed Maple Retreats xa ubhukishe nangaphambi kokufika.
Apho Uya khona:
-Umzuzu o-1 ukuya eGreen Hills Gcina/I-Pudding Pond yokunyuka intaba, ukubaleka, ukukhwela ikhephu kunye nokunqumla ilizwe lokutyibilika ecaleni kweemayile ezingaphezu kwama-50 emizila enemibono emangalisayo yeMount Washington kunye neRange kaMongameli.
-5 imizuzu ukuya kwiivenkile zaseConway Village kunye neeresityu
-Imizuzu emi-7 ukuya kwiiSettlers Green Outlets
-Imizuzu emi-5 ukuya eCranmore Mountain Resort
-8 Imizuzu ukuya Echo Lake State Park
- 15 imizuzu ukuya kuMhlaba weBali
-Imizuzu eli-18 ukuya e-Attitash Ski Resort
-17 imizuzu ukuya eKancamagus Highway
Eli khaya lisebenzisa i-self check-in system eneqhosha le-elektroniki
-Umzuzu om-1 ukuya eGreen Hills Gcina/iPudding Pond ukuze uhambe, ubaleke, ukhwele ikhephu kunye nokunqumla ilizwe lokutyibiliza ngaphezulu kweemayile ezingama-50 zeendlela ezinombono omangalisayo wemibono yeMount Washington kunye noluhlu lukaMongameli.
-7 imizuzu ukuya Settlers Green Outlet
Le ndawo ilawulwa yiRed Maple Retreats kwaye siyathembisa ukukunika utyelelo oluphezulu. Ukungena kulula kunye nomntu okufutshane nawe ukuze akuncede ngayo nayiphi na indlela. Kubonelelwe ngenkonzo epheleleyo yokuthuthwa kwenkunkuma, kwaye ufika ekhayeni lakho licocwe ngobuchule, kubonelelwe ngezinto zangasese kunye neebhedi zenziwe ngokupheleleyo. Incwadi yethu eyamkelekileyo iya kubonelela ngazo zonke iinkcukacha zekhaya kunye neendawo ozifunayo ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho.
Iindwendwe kufuneka zibe neminyaka eyi-25 kwaye kufuneka zibonise i-ID yesithombe (ilayisensi yokuqhuba)
Zonke iindwendwe kufuneka zijonge kwaye zisayine isivumelwano sethu sokurenta kunye neRed Maple Retreats xa ubhukishe nangaphambi kokufika.
Akukho zinja zivumelekileyo.
Akukho maqela, akukho ndwendwe zangaphandle, akukho ndwendwe zasebusuku ngaphandle kwemvume yangaphambili evela kummkeli wakho.
Musa ukwenza izinto ezingekho mthethweni naphina kwipropati. Oku kusebenza kuzo zombini iziyobisi kunye nomsebenzi we-intanethi.
Ukuba uyaphula okanye uyonakalisa into, nceda usazise kwaye ulungiselele ukutshintshwa okanye ukulungiswa kwayo.
Musa ukushiya nakuphi na ukutya okuya kutsala izinambuzane ezingamenywanga. Ikhaya lethu alinazinambuzane kwaye singathanda ukuligcina linjalo :)
Akukho kutshaya naluphi na uhlobo, icuba / icuba kunye / okanye iVaping- musa ukulahla imidiza yakho kwiitoti zenkunkuma zendlu. Kuya kubakho intlawulo ye-$ 400 ukuba ukutshaya kwenzeka.
Nceda uhloniphe ingingqi-ixesha lenzolo ngu-10pm-8am
Imithetho eyongezelelweyo yendlu yokusebenza kwezixhobo ezikhethekileyo ekhaya iya kufumaneka kwindawo
Buyisela zonke izitshixo- kukho i-$ 15 intlawulo yezitshixo ezilahlekileyo okanye ezingekhoyo
Landela jonga imiyalelo yokususwa kwenkunkuma, apho ushiya khona izitshixo, njl
Le ndawo ilawulwa yiRed Maple Retreats kwaye siyathembisa ukukunika utyelelo oluphezulu. Ukungena kulula kunye nomntu okufutshane nawe ukuze akuncede ngayo nayiphi na indlela. Kubo…